KuLinux Vakapindwa muropa isu tinoshanda kukuzivisa iwe nezvezvazvino uye zvakakosha nyaya dzine chekuita neGNU / Linux nyika uye Mahara Software. Isu tinosimudza zvirimo nezvidzidzo uye hapana chimwe chatinoda kunze kwevanhu vasina kumbozviita vanopa Linux mukana
Sechikamu chekuzvipira kwedu kune nyika yeLinux uye Mahara Software, Linux Vakapindwa muropa vanga vari shamwari ye openexpo (2017 na2018) uye iyo Yemahara ne 2018 iwo maviri akakosha Zviitiko zveiyo chikamu muSpain.
Iyo edhisheni timu yeLinux Vakapindwa inoumbwa neboka re nyanzvi muGNU / Linux uye Mahara Software. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chechikwata, unogona titumire iyi fomu kuti uve mupepeti.
Zvezvangu zvikuru zvandinofarira uye izvo zvandinofunga zvekuzvivaraidza zvese zvine hukama nematekinoroji manyowani zvine chekuita neotomatiki yekumba uye kunyanya kuchengetedzeka kwemakomputa. Ini ndiri Linuxer pamoyo nechido uye shungu yekuenderera mberi nekudzidza nekugovana zvese zvine hukama nenyika ino inoshamisa yeLinux uye matekinoroji matsva. Kubva 2009 ndakashandisa Linux uye kubvira ipapo mumaforamu akasiyana uye nemablog angu ndakagovana zvandaisangana nazvo, matambudziko uye mhinduro mukushandiswa kwezuva nezuva kwezviwanikwa zvakasiyana zvandakaziva uye nekuyedza.
Ini ndinofarira zvehunyanzvi uye ndinoda kudzidza nekugovana ruzivo nezve makomputa anoshanda masisitimu uye mapurani. Ndakatanga ne SUSE Linux 9.1 ne KDE senzvimbo yedesktop. Kubva ipapo ndanga ndichifarira nezve ino inoshanda system, zvichinditungamira kuti ndidzidze uye ndibvunze zvakawanda nezve ino papuratifomu. Mushure meizvozvo ndanga ndichitsvaga zvakadzama mune ino inoshanda system, ndichibatanidza izvo nemakomputa ekuvaka nyaya uye kubiridzira. Izvi zvakanditungamira kuti ndigadzirewo mamwe makosi ekugadzirira vadzidzi vangu zveLPIC zvitupa, pakati pevamwe.
Ini ndiri mumwe munhu anofarira dzinenge zvese zvine chekuita netekinoroji, uye chikamu chakakosha chehunyanzvi chine hukama nemakomputa. Ini ndakasiya PC yangu yekutanga neWindows, asi kunonoka kweMicrosoft system mashandiro kwakaita kuti nditarise dzimwe nzira. Muna 2006 ndakachinjira kuLinux, uye kubvira ipapo ndakashandisa makomputa mazhinji, asi ini ndagara ndiine imwe neiyo kernel yakagadzirwa naLinus torvalds. Zvandakashandisa zvakanyanya zvave zvakagoverwa zvichibva paUbuntu / Debian, asi ini ndinoshandisawo vamwe vakaita saManjaro. Seye techie, ini ndoda kuyedza zvinhu pane yangu Raspberry Pi, uko kunyangwe Android inogona kuiswa. Uye kupedzisa denderedzwa, ini zvakare ndine 100% Linux piritsi, iyo PineTab uko, nekuda kwechiteshi chemakadhi e SD, ndiri kutevera kufambira mberi kwemaitiro akadai seUbuntu Kubata, Arch Linux, Mobian kana Manjaro, pakati pevamwe. Ini ndinodawo kuchovha uye kwete, bhasikoro rangu harishandisi Linux, asi nekuti hapasati paine mabhasikoro akangwara parizvino.
Diego ChiGerman Gonzalez
Ini ndakazvarirwa muBuenos Aires uko kwandakadzidza kuda makomputa ndine makore 16. Sekusaona zvakanaka, ini pachangu ndakaona kuti Linux inovandudza hupenyu hwevanhu, uye ndinoda kubatsira vanhu vazhinji kuti vabatsirwe nekuishandisa.
Semunhu anoda New Technologies, ndanga ndichishandisa Gnu / Linux uye Mahara Software kubvira ingangoitanga. Kunyangwe ini distro yandinofarira iri kure neUbuntu, Debian ndiyo distro yandinoshuvira kugona.
Kushushikana nezveLinux uye zvese zvine chekuita neiyi sisitimu inoshanda, ini ndinoda kugovana ruzivo uye zvakaitika. Ini ndinoda kunyora zvese zvitsva zvinobuda, zvive zvitsva distros kana zvigadziriso, zvirongwa, makomputa ... muchidimbu, chero chinhu chinoshanda neLinux.
Yemahara software fanatic, sezvo ini ndakaedza Linux ini handina kukwanisa kurega. Ini ndashandisa akawanda akasiyana ma distros, uye vese vane chimwe chinhu chandinoda. Kugovera zvese zvandinoziva nezve ino inoshanda system kuburikidza nemazwi ndicho chimwe chinhu chandinofarira.
Computer Injiniya, ndiri anonyanya kufarira Linux. Iyo sisitimu yakagadzirwa naLinus Torvalds, kumashure muna1991, yakandiita kuti ndide kushanda nekombuta. Kutsvaga zvese zvakavanzika zvechero distro kunondigutsa zvakanyanya.